शक्तिशाली भएर उदाउँदै रेशम चौधरी, श्रीमतीलाई अध्यक्षसहित नयाँ दल दर्ता ! « Ok Janata Newsportal
शक्तिशाली भएर उदाउँदै रेशम चौधरी, श्रीमतीलाई अध्यक्षसहित नयाँ दल दर्ता !
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीले नयाँ दल दर्ताको तयारी गरेका छन् ।
थरूहट क्षेत्रलाई आधारभूमि बनाएर चौधरीले पुस १८ गते दल दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको नरसंहारमा मुख्य आरोपी बनाइएका रेशमलाल चौधरीले मधेसवादी दल परित्याग गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लागेका हुन् ।
चौधरीका निकटस्थ स्रोतका अनुसार उनले मधेसी दल परित्याग गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लागेका हुन् । रातोपाटीलाई प्राप्त कागजात अनुसार चौधरीले २०१ जनाको केन्द्रीय सदस्य रहने गरी नागरिक प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता गर्न लागेका हुन् । नयाँ पार्टीको चुनाव चिन्ह ढकिया राख्न लागिएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ पार्टीको शासकीय स्वरुपमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी दलित जनजाति, थारु, मुस्लिम महिलाका लागि अनिवार्य आरक्षित सिटको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
चौधरीकै दावीलाई मान्ने हो भने थारु समुदाय र रेशमलाल चौधरी तर्फका उम्मेदवारबाट राजपालाई एक लाख ५० हजारभन्दा बढी मत समानुपातिकतर्फ प्राप्त भएको थियो ।
तर थारु समुदाय र चौधरी पक्षधरबाट पाएको मतकै आधारमा राष्ट्रिय पार्टी बनेको राजपाले थारु समुदाय र चौधरीको पक्षमा केही नगरेको भन्दै चौधरीले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लागेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
मधेसवादी दलले थारु समुदायलाई भोट बैंकका रुपमा मात्रै लिएको र चौधरीलाई देखाएर सत्ताको बार्गेनिङ मात्रै गरेको चौधरीले आरोप लगाउने गरेका छन् । चौधरी स्रोतले रातोपाटीलाई भन्यो, हामीले मधेसवादी दललाई भनेको कुरा के हो भने सडक, सदन र सरकारसँग रेशम चौधरीको मुद्दालाई उठाइदिनुप¥यो भन्ने थियो ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरी यतिबेला कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । यद्यपि उनको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ र अन्तिम अदालतबाट फैसला भइनसकेको अवस्थामा उनकै अध्यक्षतामा दल दर्ता गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल नै छ ।
चौधरीले अत्यधिक बहुमतका साथ चुनाव जितेको कारण चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले पनि थारु समुदाय र टीकापुर क्षेत्रबाट निर्वाचनमा गएमा जित्ने दावी गरिएको छ । त्यसैकारण पनि चौधरी अध्यक्ष हुन नपाए श्रीमती रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाउने र चुनावमा उठाउने तयारी भइरहेको छ ।
चौधरीनिकट स्रोतका अनुसार पुस १८ गते थारु, वादी, जनजाति आदि समुदायको भेषभूषा, बाजा र झाँकीसहित निर्वाचन आयोग गएर दल दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।